ရထားခရီးသွားပြင်သစ်မော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ2၏ 15 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ သမုဒ္ဒရာ၏အနက်၌, ကွာယဉ်ကျေးမှုကနေဝှက်ထား၏, နှင့်အချိန်အားဖြင့်နဂိုအတိုင်း, အဆိုပါများမှာ 10 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရေငုပ်ခြင်းနေရာများ. ရောင်စုံတောက်ပသောသန္တာကျောက်တန်းများမှဒုတိယကမ္ဘာစစ်သင်္ဘောများပျက်စီးခဲ့သည်, တောရိုင်းပင်လယ်ဘဝ, နှင့်အပြာတွင်း, ဒီရေငုပ်သောကြောင့်, သင်၏ရေငုပ်ဂီယာ prep…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား, ...
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ သီးသန့်တည်ရှိမှု, 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်အဆောက်အ ဦ, ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း, နှင့်တည်နေရာ, လာမည့် 10 အစက်အပြောက်ကအားလုံးကိုရပြီ. ဤ 10 ဥရောပရှိအားရလောက်သောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝနှင့်ဝိုင်းရံထားပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အရေးများနှင့်အတူပါရှိသည်. ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ရင်ခုန်စရာ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, အီတလီ၏ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်, အိမ်တံခါးပြင်ပမှာပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၌တည်၏, ဒါမှမဟုတ်တစ်နေရာရာမှာတရုတ်နိုင်ငံ, ဒီထိပ်တန်း 10 လိုချင်သောစုံတွဲများခရီးစဉ်ကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်. ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
7 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Destinations များကိုချစ်ပါ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပရဲတိုက်များနှင့်ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးများမှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဟောင်ကောင်အထိ, ဤ7ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာနေရာများသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတိုးပွားစေပါလိမ့်မည်. ဤ7အချစ် ဦး တည်ရာများသည်သင်၏အချစ်ဇာတ်လမ်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, နှင့်မှော်ပြန်လည်စတင်ရန်. ဤဆောင်းပါးသည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဥရောပကနေ “တောင်ငယ်တို့သည်လှုပ်ရှား။ ၊”. အမှန်မှာအောက်ပါ 12 တောင်တို့သည်သင့်ကိုရွှင်လန်းစေ။ ၊. ကျော်ကြားသောအဲလ်ပ်တောင်တန်းများနှင့် Pyrenees မှစ။ Czech Republic ၏ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်, ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်တက်ခွင့်ပေးပါ…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ...
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ မင်းက Diva လား, ဖက်ရှင်, ကွမ်းခြံကုန်း, လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, သို့မဟုတ် Self- အဓိပ္ပာယ်အဘို့အဆင်သင့်မ, ဤ 10 ကြောက်မက်ဘွယ်သောလိင်တူချစ်သူခရီးသွားနေရာများသငျသညျပူးပေါင်းနှင့်ဆင်နွှဲပါလိမ့်မယ်. ပဲရစ်မှာအနမ်းကနေဘာလင်မှာရော့ခ်ကြယ်ပွင့်ကဲ့သို့ပါတီရန်, ဒီအံ့သြဖွယ်ဥရောပမြို့ကြီးအားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်။ ဖြစ်ကြသည်,…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ...
အားဖြင့် မင်းသမီး Emma သံမဏိ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ တက်ကြွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဥရောပသည် ဦး ဆောင်တိုက်ကြီးဖြစ်သည်, နေရာအနှံ့, နှင့်ပျော်စရာ - ပြည့်ဝခေတ်သစ်မြို့ကြီးများ. ဗိသုကာဆိုင်ရာအံ့ဖွယ်အမှုများများစွာရှိပါသည်, ပြတိုက်, သငျသညျစဉ်းစားချင်ပါတယ်တိုင်းဥရောပတိုင်းပြည်ရှိစားသောက်ဆိုင်များ. တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်ရှိ nightlife နှင့်အစားအစာများသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်. တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်…
ကားသွားလာရေးသိကောင်းစရာများ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂရိနိုင်ငံ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား, ...
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ ရောင်စုံ, ထူးခြားဆန်းပြားသော, နှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကျက်စားရာနေရာအတွက်ထူးခြားသော, မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ် 12 တိရိစ္ဆာန်များဥရောပ၌တွေ့မြင်ရန်အများဆုံးထူးခြားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များ. အနက်ရှိုင်းဆုံးသမုဒ္ဒရာ၌နေသော, အမြင့်ဆုံးအဲလ်ပ်တောင်တန်း, သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ဥရောပသစ်တောများ၌အနားယူ, ဤအဘို့အမြျှောအပေါ်ဖြစ်သေချာပါစေ…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ...
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ 99% တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရှာဖွေသူများသည်မော်ကွန်း Safari ခရီးစဉ်အတွက်အာဖရိကသို့သွားရန်ရွေးချယ်ကြသည်. သို့သျောလညျး, ငါတို့ရွေးပြီ 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ, ဥရောပကနေတရုတ်အထိ, ဒီထက် - ခရီးသွားလာ, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအမှတ်ရစရာနှင့်အထူးသောနေရာများ. ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်…
Eco ခရီးသွားအချက်အလက်များ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ...
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ကြယ်အောက်ရှိအံ့မခန်းဖွယ်ရာရှေးခေတ်ပြဇာတ်ရုံမှသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြော့ခန်းအထိရှိသည်, ဤ 12 အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများကိုအမှန်တကယ်ခံစားလိုပါကကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတကွင်းများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ရှန်ဟိုင်း, ဘာလင်, လန်ဒန်, နှင့်အီတလီအကောင်းဆုံးနေရာများအနည်းငယ်သာဖြစ်ကြသည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ...